Ihu Igwe, Ihu Igwe, Mpaghara Oge | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Climate, Weather, Time Zones
Ebee ka mpaghara ọzara dị na Russia?
Ebee ka mpaghara ọzara dị na Russia? Osimiri Archedinsko-Don dị n'ókèala Serafimovichsky na mpaghara Frolovsky nke mpaghara Volgograd. Mpaghara ebe ahihia ndị na-eri nri bụ banyere 200 puku hectare. Osimiri Tsimlyansky dị n'ókèala nke ...
Kedu ebe mpaghara mba anyị na ihe kpatara ọdachi ndị na-emere onwe ha? Kedu usoro iji merie ha?
Kedu ebe mpaghara mba anyị na ihe kpatara ọdachi ndị na-emere onwe ha? Kedu usoro iji merie ha? ọtụtụ afọ gara aga mgbe nanị mba ụwa dịka Amerịka, Russia, China, England nwetara ume ...
N'ime obodo dị na Russia ọ dịghị oge oyi?
Kedu obodo obodo Russia enweghị oge oyi? Mpaghara mpaghara ihu igwe kacha ekpo ọkụ na Russia bụ ndịda mpaghara Krasnodar - kpọmkwem Sochi. Yabụ, ebe ahụ enwere nkezi afọ okpomọkụ bụ 14,2 C Nkezi okpomọkụ ...
Kedu ọnọdụ ihu igwe na England?
Kedu ihe ihu igwe dị na England? Mmiri na oyi na-atụ. Ihu igwe bụ ugwu na-ekpo ọkụ bụ Oke Osimiri. Ọnwa kachasị atụ bụ Jenụwarị (site na +3 C ruo…
Kedu ihu igwe na January, February na Ijipt? Ma ọ bụ olee mgbe ọ ka mma ịkwọ ụgbọala?
Kedu ka ihu igwe dị na Jenụwarị, Febụwarị na Egypt? Ma ọ bụ olee mgbe ọ ka mma ịnya? Oge ezumike n’Ijipt na December Site na Disemba 1 ruo Disemba 20 n’Ijipt - oge ezumike. Ahịa dị ala, ụlọ…
Biko nyere aka kọwaa atụmatụ Australia
Biko nye aka kọwaa Relief nke Australia dịka atụmatụ ahụ siri dị: Australia bụ otu n'ime mpaghara kachasị. Otu njiri mara njiri mara okike bụ oke mgbasa nke mbara ọzara. Ala a bara ụba n'ọtụtụ ụdị eke, ...
esi tufuo acne stains
esi ewepu ihe otutu di nkpa Ọ di ichọ onye okacha amara. Ezi ntụziaka na badagi ... otu enyi toro nke ukwuu. na Intanet enwere otutu n'ime ha, ma banye na nyocha maka “Ezi ntụziaka na badagi” ma ọ bụrụ na ịchọ mma na - enyere aka…
Awa ole ka ọdịiche dị n'etiti Moscow na Vorkuta?
Olee otu awa dị iche n'etiti Moscow na Vorkuta? Ha bi na Vorkuta dịka oge Moscow siri dị. Oge atọ a kewapụrụ obodo ndị a: ọ bụrụ na Moscow ọ dị 3, yabụ na Vorkuta ọ bụ 12.00. Oge ...
Aghọtaghị m ihe bụ nnukwu snow. Agụrụ m na ịntanetị - o doghị anya.
Aghọtaghị m ihe bụ nnukwu snow. Agụrụ m na ịntanetị - o doghị anya. Kedu ihe ị na - e fromomi na Wikipedia? Nwoke ahụ kwuru na ọ bụghị ihe edere edere ederede doro anya
ebee ka isi iyi ndagwurugwu ahụ si
ebee ka isi iyi mmiri dị na Kazakhstan, nke dị na mpaghara Kustanai. Ndị kasị ukwuu na-ebute osimiri bụ Ui, Iset, Tura, Tavda, na Ubagan. Isi iyi nke TOBOL osimiri dina n'ókè nke ọwụwa anyanwụ nke Southern Urals ...
Kedu oge ọ bụ na France, na Paris?
Kedu oge ọ bụ na France, na Paris? Ugbu a 16: 13 Ma ha zara n'oge dị iche iche! Nzuzu. Na 2 awa obere karịa Moscow http://www.timeanddate.com/worldclock/full.html http://logic-bratsk.ru/term/pogoda.php?key=p8Exact time Ugbu a ị nwere ike ịlele ...
Ị maara kalịnda anyị bi ugbu a? Kedu kalenda ị ka maara?
Ị maara kalịnda anyị bi ugbu a? Kedu kalenda ị ka maara? Ugbu a, anyị na-ebi ndụ dị ka kalenda Julian (ụdị ọhụụ), tupu mgbanwe anyị biri dịka onye Gregorian (ochie style) ...
Kedu ka esi tọọ njupụta nke ọnwa ahụ?
Kedu ka esi tọọ njupụta nke ọnwa ahụ? N'ebe a, a na-ewepụta ihe niile: Ị nwere ike ịgbakọ njedebe nke okpomọkụ kwa ụbọchị n'onwe gị. Were ihe ndị kwesịrị ekwesị. Ugbo ala na-ejikarita onodu ozo 8 ikuku otu ubochi, nke bu ...
okpomọkụ na ndịda na n'ebe ugwu
Okpomoku di na akuku akuku ulo na akuku ugwu na akuku iru na akuku ihe dika otutu 45 - 60 ogo, na ndida - 60 - 80 ogo. Amaara m n'ezie na ọnọdụ okpomọkụ dị na South Pole ...
Kedu abalị pola? Ụbọchị ụtụtụ? White ehihie? Olee otú ha si dị iche na ibe ha? Mgbe na ebee ka nke a nile dị na Russia?
Gịnị bụ polar n'abalị? Bọchị polar? Abalị na-acha ọcha? Kedu ka ha si dị iche na ibe ha? Kedu mgbe na ebe ihe a niile dị na Russia? google search maka "polar day", "polar night", "abalị na-acha ọcha" ...
Ndị mmadụ na-enyere m aka mejupụta eserese ọdịdị ala ...
Ndị mmadụ na-enyere m aka mejupụta okpokoro site na ọdịdị ala ... Dima, naanị ị na-eme ya ma ị nwere ike, ee, ị ga-emerịrị ya onwe gị. ihu igwe, okpomọkụ, wdg .. gịnị? ...
iji mara mpaghara mpaghara ihu igwe na mpaghara ugwu.,
mara mpaghara anakpo nke ihu igwe na nke ihu igwe., N'okwu, dị mma! + Subtropics - mpaghara ihu igwe nke ụwa. Subtropics dị n'etiti ebe okpomọkụ nke dị na igwe mmado na ọnọdụ ikuku, ya bụ, ihe dị n'etiti ...
nkezi oyi na okpomọkụ okpomọkụ na africa
Oge oyi na okpomọkụ n'oge Afrika bụ mba kachasị mma n'Africa n'ụwa. A na-ebute ya na ebe okpomọkụ na ebe obibi na ebe obibi, na ya mere ọ na-enwetakwa ìhè dị ukwuu nke radiation radiation (na ugwu ...
Ebee ka mmiri Titanic dị?
Ebee ka mmiri Titanic dị? 4 April 1912, ihe dị ka etiti abalị na North Atlantic Ocean, narị kilomita atọ n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Newfoundland, ikekwe otu n'ime ọdachi ndị kasị njọ na-ebute n'ụgbọ mmiri ...
Kedu ọnọdụ ihu igwe na Krasnodar n'oge oyi ??
Kedu ọnọdụ ihu igwe na Krasnodar n'oge oyi ?? Kedu ụdị data? Ee, onye a na-apụghị ịdabere na ya? Ụmụ okorobịa, ị dịla na Krasnodar? N'oge oyi, anyị nwere -8 -10 ??? Kedu mgbe o mere? Ọkara dị ala! ...